Indlela Iingelosi ze-Guardian ezithumela ngayo imiyalezo kwiiNkanuko
Unqulo & Umoya Umthandazo Nokucamngca
Ukuqhagamshelana neNgelosi yakho ye-Guardian: Imiyalezo kwiiNkanuko
Iingoma zephupha ezivela kwiingelosi ze-Guardian emva komthandazo okanye ukucamngca
Ukuba udibana nelosi yakho yomgcini ngomthandazo okanye ukucamngca ngexesha lokulala, ngaphambi kokulala , ingelosi yakho yokugcina ingathumela imiyalezo ngokusebenzisa amaphupha akho. Uyakwamkela imilayezo yeengelosi ngelixa ulele kunokuba uvukile, ngenxa yezizathu ezahlukeneyo.
Ukulala kukuxosha, ngoko ke unganamathuba okuba ukhusele ingqondo njengokuba uxinzelelo okanye uloyiko luyakuthintela ukuba ungene kwizinto ezenziwa ngengelosi yakho.
Kwakhona, ingqondo yakho engacatshulwayo iyamkela imilayezo evela kwingelosi yakho yomgcini kunokuba ingqondo yakho ingqondweni, ekubeni ingqondo yakho engqondweni ingavulwa kuzo zonke iinkcukacha ezifumanayo, ngelixa ingqondo yakho ingqondweni ingayilahla ingcaciso ngaphandle kokuyiqwalasela ngokwenene ngenxa yokuba entsha kwaye ingaqhelekanga eya kuwe.
Ingelosi yakho ye-Guardian kwiiNkobe zakho
Ngelixa uphupha, ingelosi yakho yomgcini inokungena kumaphupha akho ukwenza ukubonakala komntu (ngokuqhelekileyo njengotitshala okanye umhlobo osisilumko), okanye ingelosi yakho inokuthumelela iingcamango neemvakalelo ngokunxibelelana nge-telepathic ngexesha lamaphupha. Abanye abantu bakholelwa ukuba iingelosi zabo ezigciniweyo zingaphumelela kwimiphefumlo yazo ngelixa ziphupha, zikhokela ekuhambeni kwendawo yo komoya kwaye zibancede zibuyele emzimbeni yazo ngaphambi kokuba zivuse. Le ngqungquthela kuthiwa yi- astral travel .
Iinkcukacha ezichanekileyo kwiiNkanuko
Amaphupha akho aya kuphila kunye neenkcukacha ezicacileyo nantoni na xa ingelosi yakho isebenzise ukuthetha nawe.
Iifoto ziya kubonakala zicacile kwaye zimibalabala , kwaye amagama abantu abathethayo aya kuhlawula emphefumlweni wakho. Emva kokuba uvuka, uya kukhumbula iinkcukacha eziphambili malunga namaphupha akho aphefumlelwe yingelosi ongeke uwakhumbule ngamanye amaphupha akho.
Uya kuziva uvakalelo olukhulu kumaphupha apho ingelosi yakho yomgcini iyakuthetha nawe.
Ngokuqhelekileyo, loo mvakalelo iya kuba abantu bacinga ukuba bahle (njengokonwaba kunye noxolo), kodwa ukuba ingelosi yakho ingumxwayisi malunga nento ekukukhusela ngayo, unokuziva utyhafile (kodwa ungazange ucinezeleke) ukugxininisa ukubaluleka kokwenza khokelo lengelosi.
Iingcamango zizele izibonakaliso, ukuvumela ingqondo yakho engqondweni ukuba isebenze kwinkqubo yokuhlalutya yonke inkcazelo engqondweni yakho engayikujongana nayo xa uvukile. Ngokuqhelekileyo, iingelosi zokulondoloza zisebenzisa ezo zimboli ukuthumela abantu imiyalezo ngamaphupha.
Nanini na xa uphupha ngento ebonakala ngathi ibonisa enye into, qwalasela apho ubone khona uphawu ekuvukeleni kwakho ubomi, kunye nendima edlala kuyo ebomini bakho. Unokucela ukuba ingelosi yakho yokugcina ikubonise ukuba kuthetha ukuthini ukuba uguqule kwaye uyiqonde kakuhle. Ukuba ubona iipateni ezivela kumaphupha akho apho isimboli esifanayo (njengombalo othile okanye ukuma ) kubonisa amaxesha amaninzi, kubalulekile ukuthandazela malunga neepatheni emva kokuvusa ukuze ufumanise oko bathethayo.
Iintlobo ezahlukeneyo zoMyalezo kwiiNkanuko
Ingelosi yakho yomgcini inokuthetha iintlobo ezahlukeneyo zemilayezo kuwe ngamaphupha akho.
Nazi ezinye zemiyalezo ezigcinwa ziingelosi zidla ngokugqithisa ngamaphupha:
Ukuqonda ngokucacileyo ngokwakho nangobomi bakho: Ingelosi yakho yokugcina ingathumela imiyalezo ephuphayo eyenzelwe ukukunceda ukuba uqondisise kakuhle indlela ozijonga ngayo kunye nendlela oziphethe ngayo, ngoko unokubona into enempilo kwaye kufuneka yitshintshe. Okanye, ingelosi yakho ingathumela imilayezo egxininisa iminqweno kunye neetalente, kukukunceda ubone indlela engcono yokulandela oko uThixo akufunayo ukuba uphumelele.
Ukuphulukiswa : Kwimiyalezo yokuphulukisa iphupha, ingelosi yakho yomgcini ikhumbuza ngethemba lokuba uThixo uyakunikela ukuba uphilise kwiintlungu ezidlulileyo kunye namanxeba oye wabandezeleka. Ingelosi yakho ingayichaphazela imeko kwixesha elidlulileyo apho uhlupheke khona kwaye ikunike umbono wendlela ubomi bakho obuya kuba ngcono ngayo kwikamva xa ubeka ithemba lakho kuThixo kwaye ulandele apho ekukhokela khona.
Iingcamango Zobunono : Amaphupha akho anokuba neengcamango ezibonakalayo kwimilayezo evela kwingelosi yakho yomgcini eyenzelwe ukukukhuthaza, kukukhuthaza ukuba uphishekele amava amasha kunye neeprojekthi, kwaye unokukunceda ukuxazulula iingxaki. Kubalulekile ukurekhoda ezi ngcamango emva kokuvuswa ukuze ukwazi ukuzikhumbula, uze ubeke ezo zigqibo kwizenzo zobomi bakho.
Isilumkiso : Ukuba ubhekene nesimo esiyingozi kodwa engazi nto, ingelosi yakho yokugcina ingathumela isigidimi esisilumkiso malunga namaphupha akho kwaye ikubonise ukuba ungathetha ukuthatha amanyathelo okukhusela .
Isiprofeto malunga nekamva : Ingelosi yakho yomlondolozi inokuthi ikunike amaxesha ezayo ngamaphupha akho, kodwa kuphela ukuba ukwenza okunjalo kunokunceda ngokwenene (njengokuba kukho into enenzuzo onokuyenza ukuze ulungiselele isiganeko esizayo).
Isikhuthazo : Xa ingelosi yakho yomgcini ixela imiyalezo ekhuthazayo kuwe ngamaphupha, loo miyalezo iya kwakha ukuzithemba kwakho ukuba ungubani okanye ikuncede ukuba ufumene kwaye uzalisekise oko unokukwenza. Ingelosi yakho inokukunceda uzibone ngokwendlela kaThixo ukujonga ukuba unjani ngokwenene. Okanye, ingelosi yakho inokukunxusa ukuba uthathe ingozi efunekayo ukuze ulandele into efunwa nguThixo ukuba uyenze, ekuqinisekisile ukuba uya kuncedwa nguThixo ngoncedo lweendlela zonke.
Emva kokuba uvuke kumaphupha apho ingelosi yakho yokugcina ikhulume nawe, uya kuziva uvuselelwe kwaye unamandla. Uyakuvakalelwa kukuba unothando olunzulu luthando lukaThixo ngawe.
Yenza ixesha lokurekhoda naziphi na iinkcukacha ozikhumbulayo kwiphupha ngalinye apho uvile khona unxibelelwano oluvela kumlindi wakho. Emva koko awuyi kukulibala imiyalezo kwaye unokuyichaza emva komthandazo kunye nokucinga.
I-Angel Angel Candle Candle for Healing and Prosperity
Ummangaliso Umthandazo wokudibana
Ukukhanya: Inyaniso Yokomoya Yokukhanya Ngeengelosi Nezimangalo
Ukuqhagamshelana neNgelosi yakho ye-Guardian: Imiyalezo ethintekayo
Umthandazo Wemangaliso Ungayilondoloza Umtshato Wakho
Iingelosi zeKrismesi Imithandazo
Ikhandela leNtsundu Yomthandazo
Ukudibanana noMninimkhulu u-Uriyeli, Ingelosi Yobulumko
Amantombazana aseMerika aseMerika kwiRace - 1902
Imisebenzi yasekhaya yaseHomes: Indlela yokuDala iintyatyambo
Ukunyamekela Amalungu Akho Ukuze Uneminyaka Edala Yokulimala I-Body Building Building
Indlela yokusebenzisa i-Future Future Time
Ukuphononongwa kwee-Eggs zeeNtsana zeBantwana 4-8
Yintoni eyayingumngcwabo weChrysler?
Imfazwe Yehlabathi I: iMelika ijoyina iMfazwe
Plans Plans eUnited States
Oko Kufuneka Ukwazi Ngezibalo Ezilandelelanayo
Ngubani oo-4 iiKumkani kwi-Deck yamakhadi?
Isingeniso kwiNcwadi kaRute
Qonda iNgqiqo yezoQoqosho zoLwabiwo-mali
Ikholeji ye-Allegheny i-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
I-20 yeXesha leNyaka yexesha le-1900 ukuya ku-1999
I-Top 10 ye-Mozart Recordings, iAlbum, neengoma
Iimimandla zeTropical Rainforest kunye neZakhiwo